Ny fifamelan’ny samy malagasy – Malag@sy Miray
Tohin’ny toraka natao teo aloha dia somary hiverenantsika ny momba ny resaka fampihavanana. Raha zohina tsotra ny ny hevitra fonoson’ny fampihavanana dia tsorina hoe famerenana ho iray loha ka ho tongotra miara-mamindra sy soroka hiara-hilanja. Io fampihavanana io dia tsy vitan’ny resaka « Amnistie » fotsiny, TSY AMPY IZANY! Ny fampihavanana dia miainga amin’ny fifampiresahana marina sy ny fifamelana tena avy ao am-po ary aorian’izay vao afaka miavana.
Nisy hetsika iray tokony natao momba ny fampihavanana sy fifamelan’ny polisim-pirenena, ny zandary, ny miaramila, ny mpiandry fonja ary ny ministeran’ny fitsarana. Anisan’ny dingana voalohany ilain’ny malagasy io mba handrosoana. Indrisy anefa fa notsindrin’ny famoahana ireo mpikambana tao amin’ny FFM ny daty tokony nanaovana izany. Dia miandry ny fotoana manaraka indray izany.
Araka ny efa voalaza ihany koa tao amin’ny toraka teo aloha dia ilaina ihany koa ny fampihavanana ny fiangonana zandriny sy ny fiangonana zokiny. aoka ny fiangonana zokiny tsy hanaratsy sy hanenjika ny fiangonana zandriny ka hiteniteny azy hoe sekta io satria tsy sekta noforoniny tsinona fa fifohazam-panahy nentin’Izy Tompo. Ary aoka ihany koa ireo fiangonana zandriny tsy hiteniteny ireo fiangonana zokiny sy hitsaratsara azy hoe « tsy misy fifohazam-panahy » satria tsy tokony hitsara fa mbola ho tsaraina. Mbola dingana henjana iray hafa io.
Ilaina ihany koa ny fanajanonana ny fampisaraham-bazan’ny samy malagasy ka ny hijanonan’ny resaka hoe ambaniandro sy tanindrana satria iray ihany ny malagasy. Ary entanina ireo Loholona, ireo Tangalamena, ireo Ampanjaka sy taranak’Ampanjaka mba hifanantona ny foko rehetra ka hifamela ary hihavana tokoa fa tsy sanatria mifampihatsara vela-tsihy ka mody miresaka sy miara-miasa nefa aty ambadika mbola mifandrangitra amin’ny adim-poko toy izay nitranga farany tamin’ny taona 90. Ary aoka ihany koa izay ny tsy fitiavana Merina ka ireo mpanao pôlitika hilatsaka ho filoham-pirenena mihitsy sanatria no mitarika an’izany mandrangitra ny mpomba sy mpanaraka azy.
Ny fifamelan’ny samy mpitondra antoko sy mpanao pôlitika moa izany iny dia efa ankinina amin’ny FFM ka mba tsy ho resaka ambony latabatra sy haino aman-jery fotsiny sanatria fa mba tena fampihavanana feno no hitranga. Ny vahoaka malagasy amin’izao dia efa mhafantatra hoe ireo mody miady sasany ireo dia mifanatona ihany saingy toa fifanatonana « par intérêt » araka ny fiteny izany. Ka mila mihavana sy mandeha amin’ny lala-mahitsy ireo mpanao pôlitika.